Yangon’s New City Project receives 16 proposals from nine countries | Myanmar Business Today
HomeBusinessYangon’s New City Project receives 16 proposals from nine countries
New Yangon City Development Project has received 16 Expressions of Interests (EOI) submitted by companies and consortiums from nine countries in the Swiss Challenge for the first package of works launched on October 15, 2020, by the Swiss Challenge Tender Committee.
It is the Committee’s objective to applyastructured and transparent process with the aim of encouraging the private sector and fostering competition. The Committee has chosen an international consulting firm, Roland Berger, as Transaction Advisor to administer the Swiss Challenge.
The Tender Committee consists of five members chaired by Deputy Minister of Transport and Communications U Kyaw Myo, with Deputy Minister of Planning, Finance & Industry U Sett Aung, Deputy Minister of Ministry of Investment and Foreign Economic Relations U Bharat Singh, Minister of Planning and Finance of the Yangon Regional Government U Ye Min Oo, and the Secretary of Yangon City Development Committee Daw Hlaing Maw Oo as members.
The project received the submission of the EOIs from 16 companies and consortiums including two local companies and two local consortiums.
According to the project’s masterplan, the New Yangon City will be both livable and productive, able to supporta1.2 million population and create around two million jobs. The project includesalogistics component that will connect the new city with nearby cities, to ensure land prices do not drop after the new city is completed.
ရန်ကုန်မြို့တော်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းသစ်၊ ပထမအဆင့်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် နိုင်ငံပေါင်း (၉)နိုင်ငံမှ စိတ်ပါဝင်စားကြောင်း အဆိုပြုလွှာ (EOI)များလက်ခံရရှိသည်ဟုပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဌာနမှ သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်‌ရေးစီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်း စီမံကိန်းများ၏ ပထမ အဆင့်အဖြစ် စီးပွားဖြစ်ရပ်တည်နိုင်စွမ်းရှိမှု သေချာသည့် စက်မှုဇုန်နှင့် လိုအပ်သော အထောက်အကူပြုအခြေခံအဆောက်အဦများကို ဆွစ်ယှဉ်ပြိုင်တင်ဒါ (Swiss Challenge) ခေါ်ယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန် Swiss Challenge တင်ဒါကော်မတီကို ၁၆-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
အဆိုပါ Swiss Challenge တင်ဒါကော်မတီ သည် စီမံကိန်းရင်းနှီးတည်ဆောက်သူကို နိုင်ငံ တကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ပွင့်လင်းမြင်သာ မှု၊ တရားမျှတမှုနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိမှု တို့ဖြင့် အလေးထားရွေးချယ်နိုင်ရန် နိုင်ငံတကာ အကြံ ပေးကုမ္ပဏီများအနက်အကြံပေး ဝန်ဆောင်သူ (Transaction Advisor) အဖြစ် ဂျာမနီ နိုင်ငံအခြေစိုက် Roland Berger နိုင်ငံတကာ အကြံပေးအဖွဲ့ကို ရွေးချယ်လုပ်ငန်းအပ်နှံ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အကြံပေးဝန်‌ဆောင်သူ Roland Berger သည် Swiss Challenge တင်ဒါ လုပ်ငန်းစဉ်၏ ပထမ အဆင့်အဖြစ် စီမံကိန်းရင်းနှီး တည်ဆောက်ရန် စိတ်ပါဝင်စားကြောင်း အဆိုပြုလွှာ (Expression of Interest – EOI)များကိုခေါ်ယူခဲ့ရာ နောက်ဆုံး ထားတင်သွင်းရန် သတ်မှတ် ထားသည့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၂) ရက်နေ့တွင် စင်ကာပူ၊ ဂျပန်၊ အီတလီ၊ စပိန်နှင့် ပြင်သစ် နိုင်ငံအပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်း (၉)နိုင်ငံရှိ ကုမ္ပဏီနှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းအဖွဲ့ (Consortium) ၁၆ ဖွဲ့ထံမှစိတ်ပါဝင်စားကြောင်း အဆိုပြုလွှာ (EOI) များ လက်ခံရရှိခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ထိုထဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီ (၂) ခုနှင့် အကျိုးတူ ပူးပေါင်းအဖွဲ့ (Consortium) (၂ ) ဖွဲ့တို့ ပါဝင်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ထို့အပြင် ရွာမြို့ ငါးခု၊ တံတား နှစ်စင်း၊ ၂၆ ကီလိုမီတာ အရှည် ပင်မလမ်းကြောင်းများ၊ ၁၀ စတုရန်းကီလိုမီတာရှိ စက်မှုဇုန်၊ လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ် အားဖြန့်ဖြူးရေး အဆောက်အအုံများ၊ ရေသန့်နှင့် ရေဆိုးထုတ်စက်ရုံ များ ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Previous articleUS offers technical assistance to boost investments in Myanmar
Next articleShan State to implement five tourism cities